ओली-प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता, के के भए कुराकानी ? Canada Nepal
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शनिवार छलफल भएको छ । ओली(प्रचण्डबीचबीच करिब ११ दिनपछि शनिबार शनिवार छलफल भएको हो ।
आजको छलफलमा ओली-प्रचण्डबीच नेकपाभित्रको जारी विवाद समाधान गर्ने बिषयलाई लिएर छलफल भएको बताइएको छ । आजको छलफलको क्रममा प्रचण्डले ओलीसँग तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै आजको छलफलमा कोरोना महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथाम, कर्णाली विवाद प्रकरण लगायतका बिषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
यसअघि पार्टीका दुई अध्यक्षबीच कात्तिक ४ गते कर्णाली प्रदेशको विवाद सल्ट्याउने बिषयमा छलफल भएको थियो । त्यसपछि कुनै छलफल हुन सकेको थिएन ।
पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, राजदूत सिफारिस लगायतका विभिन्न विषयलाई लिएर प्रचण्ड ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका थिए । त्यसपछि ओली निकटका नेताहरु सन्देश लिएर खुमलटार पुगेपनि प्रचण्ड छलफलमा बस्न मानेका थिएनन् ।
कार्तिक १५, २०७७ शनिवार १६:०५:५५ बजे : प्रकाशित
“ध्वंशात्मक क्रान्ति आजको आवश्यकता होइन, तपाईँको क्रान्तिमा भ्वाङ परिसक्यो, अब तपाईँ पनि नेकपामा प्रवेश गर्नुप¥यो”, उनले भने । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका बाँस्कोटाले विकास–क्रान्तिको निरन्तरता आजको आवश्यकता भएको औँल्याए । “चन्द कमरेड तपाईँका नेता कार्यकर्तालाई तपाईँको क्रान्ति बेअर्थ लागेर सबै जिल्लाबाट नेकपामा प्रवेश गरिरहेका छन्, तपाई पनि नेकपामा समाहित भए राम्रो हुन्छ,” उनले दोहोर्‍याएका छन् ।
बाँस्कोटाले नेपालमा हिंसात्मक क्रान्ति जरुरी नभएको बताउँदै शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष र रुपान्तरणको भने आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । “बमभन्दा ठूलो शक्ति जनता हो, उनिहरुको फैसला नै मुलुकको परिवर्तनको संवाहक हुन्छ”, उनले थपे, “जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, जनजीविका, लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिसँगै आत्मनिर्भरता नै क्रान्ति हो भन्ने देखाइसकेका छन्, अब यसैमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष गरिरहने हो ।” नेकपामा कोही दास र कोही मालिक नभएको उनको धारणा थियो ।
तामाङका अनुसार चन्द माओवादीको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कमिटीमा हाल १४ जनामात्रै रहेको र जनवर्गीय सङ्गठनसहित करिब १०० को हाराहारीमा नेता कार्यकर्ता रहेका छन् । उनीहरुमध्ये केहीलाई नेकपामा पुनः प्रवेश गराउने प्रयास भइरहेको तामाङले जानकारी दिए । रासस
मंसिर १३, २०७७ शनिवार २०:२४:४२ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद देखा पर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नरुचाउने भूतप्रेतहरु सल्बलाउन थालेको बताएका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले सन् २०२१ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्षको रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले कोभिड–१९ को चपेटाबाट जुध्दै मुलुकको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन आन्तरिक पर्यटनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
सरकारले केही गरेन भन्दै नेकपा सरकारको आलोचना गर्नेहरु पूर्वाग्रही भएको उल्लेख गर्दै भनेको बेला भेन्टिलेटर नपाउँदा, खोजेको बेला आइसीयू नपाउँदा सर्वसाधारण जनतामा केही असन्तुष्टि हुनु स्वाभाविक भएता पनि सरकार सुतेर बसेको छ जस्तो गरी आरोप लगाउनेहरुले आफ्नो विगत हेर्नुपर्ने बताए ।
विश्वका चीनलगायत थोरै मुलुकले मात्र कोरोनाकालमा आफ्नो अर्थतन्त्रको विकासलाई धेरै तल गिर्न नदिएको चर्चा गर्दै उनले विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार अहिले नेपालले यस्तो सङ्कटका बेला पनि दुई दशमलव पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री भट्टराईले कोभिड–१९ को सबैभन्दा ठूलो मार पर्यटन क्षेत्रले खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै पर्यटन व्यवसायलाई उठाउनका लागि सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरेको स्मरण जानकारी दिए ।
यसको व्यवस्थापन सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीले हेरिरहेको सो समूहका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए ।
सो अवसरमा सङ्घीय सांसद गणेशकुमार पहाडी, प्रदेशसभा सदस्य एकराज कार्की र उद्योग परिसङ्घ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष मीनप्रकाश मैनालीलगायतले पर्यटन व्यवसायको विकासका विविध पक्षमाथि प्रकाश पारेका छन् ।रासस
मंसिर १३, २०७७ शनिवार २०:१२:३१ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा आज पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विचार लिखितरूपमा पेश गरेका छन् । यसअघि मङ्सिर ३ गते अर्का अध्यक्ष दाहालले समेत प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रस्तुत विचारले पार्टीमा देखिएको समस्या, त्यसको जरो, पार्टीको सङ्कट र त्यसको सारतत्वका बारेमा छलफल हुनु र पार्टीको समस्या, सङ्कट तथा समाधान र निवारणका बारेमा छलफल हुनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । बहसले पार्टीलाई एकता र गति पैदा गर्न सक्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । आएका प्रस्तावमाथि पार्टी कमिटीमा हुने जहाँ तही बहसको प्रक्रियाले पार्टीभित्र सकारात्मक योगदान गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तथा आवश्यक छलफल र गृहकार्य गरेर फेरि १६ गते १ बजे पुनः सचिवालय बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्वाराहीमा बस्ने छ । उgले (अध्यक्ष ओली)ले लिखितरूपमा प्रस्ताव पेश गरे पनि आफूहरुले हेर्न नपाएको बताए। “पार्टीको अहिलेको समस्या, सङ्कट र त्यसलाई सामाधान गर्न छलफल बहस र अन्तरसङ्घर्षलाई सही दिशा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।
“उहाँहरुले अहिलेको छलफल र बहसले पार्टी एकतामा विचलन पैदा हुने वा पार्टी फुटको दिशातिर जानुपर्नेमा सोच्नु हुन्न वा सोच्नुपदैन”, उनले भने, “पार्टी एकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न अहिलेको छलफल र बहसलाई सदुपयोग गर्नुपर्दछ”, भने ।
उनले दुईवटा प्रस्तावमाथि अध्ययन गरेर आगामी सचिवालय बैठकमा छलफल गरिने बताए । दुवै प्रस्तावमाथि यही मङ्सिर १६ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा छलफल हुने र त्यो दिन नसकिए अर्को दिन मङ्सिर १७ गते पनि गर्र्ने जानकारी दिए । उनले पार्टीभित्र देखिएका समस्यालाई पार्टी कमिटीका बैठकमा व्यवस्थित र विधिवत ढङ्गले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिनेसमेत बताए ।
नेकपाले यही मङ्सिर १८ गते स्थायी कमिटी र मङ्सिर २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठकको आयोजना गरेको छ । रासस
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १८:२०:४८ बजे : प्रकाशित
नेकपा सचिवालय बैठक : अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रतिवेदन पेश (पूर्णपाठसहित)
काठामाडौं । शनिवार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सकिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक मंसिर १६ गते १ बजे पुनः बस्ने गरी सकिएको हो ।
आजको बैठक प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने समय राखेर सकिएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गरेका छन् । बैठकमा ओलीले पार्टीमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताको रक्षाका निम्ति जोड दिएका थिए ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १५:५९:३९ बजे : प्रकाशित
# नेकपा सचिवालय बैठक
नेकपाको सचिवालय बैठक १६ गते पुन: बस्ने गरी सकियो
काठामाण्डौ । शनिवार बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक मंसिर १६ गते पुनः बस्ने गरी सकिएको हो । अब अर्को बैठक मंसिर १६ गते १ बजे बस्ने भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १५:२६:३२ बजे : प्रकाशित
# नेकपाको सचिवालय बैठक
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुरु भएको छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गइरहेको बेला सचिवालय बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु भएको हो ।
पार्टीमा विवाद भइरहेको समयमा आज बसेको यस बैठकलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालय सदस्य सहभागी भएका छन् ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।
प्रस्तावमा ओलीले लेखेका छन्, ‘कमरेड प्रचण्ड, यो स्वस्थ बहस हो कि वारपारको लडाइँ विरोध हो भने मित्रतापूर्ण कि सत्रुतापूर्ण? तपाइँले रोजेको बाटो प्रतिवाद हो कि बिग्रहको? कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई गम्भीर संकटमा धकेल्नु भएको छ। समयले यसको उचित हिसाबकिताब गर्नेछ।’
प्रचण्डको लगाएको आरोपको खण्डन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार पार्न १० दिनको समय लिएका ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न नसकेको प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
यही मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको आरोपबारे आफूले पनि लिखित रुपमा जवाफ दिने भएकाले १० दिनको समय माग गर्दै ओलीले आरोप पुष्टि भए प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट आफू बहिर्गमन हुने र आरोप प्रमाणित नभए आरोप लगाउने आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्दै जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका थिए ।
जस कारण शनिबार बस्ने नेकपा सचिवालय बैठक प्रतिक्षित बनेको छ । यसबीचमा प्रचण्डलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन ओली पक्षधरले आग्रह गरेका थिए । तर, प्रस्ताव फिर्ता लिँदा ओलीसँग झुकेको सन्देश जाने भन्दै प्रचण्डले अस्वीकार गरेका थिए । मंसिर ३ यता प्रचण्डले आफूनिकटका नेताहरुसँगै बाक्लै छलफल र भेटवार्ता गरेका छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पदबाट हटाउने प्रचण्डको रणनीति छ ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १५:०९:३९ बजे : प्रकाशित